च्याम्पियन स्पटलाइट: जेसिका लेजेटलाई भेट्नुहोस्
Kelsea McDonough मा अप्रील 27, 2017 द्वारा लिखित।
उनी एक एमएएफ दाता र बोर्ड सदस्य हुन् जसले सबै कामहरू गर्न जुनसुकै काम र सृजनात्मकता ल्याउँछिन्।
हाम्रो च्याम्पियन स्पटलाइट श्रृंखला अनुसरण गर्नुहोस्, जहाँ हामी तपाईंलाई हाम्रा महान् सामाजिक लगानीकर्ताहरूको परिचय दिन्छौं र क्रेडिट-निर्माणको माध्यमबाट वित्तीय सशक्तिकरणलाई समर्थन गर्न उनीहरूको कार्यहरूलाई सम्मान गर्दछौं।
जेसिका लेजेटलाई भेट्नुहोस्, एक कुशल र अनुभवी लगानीकर्ता र उद्यमी। मूलतः टेक्सासबाट आएका, जेसिकाले न्यूयोर्क शहरको वाणिज्य घर जग्गामा लगानी गर्दा १ spent बर्ष बढी खर्च गरे जबकि धेरै युवा उन्मुख शिक्षा संगठनहरूलाई आफ्नो खाली समयमा सहयोग गरे। जब उनी र उनको परिवार दुई बर्ष पहिले खाडी क्षेत्रमा बसाई सरेका थिए, उनले सेवाको चाहनालाई आफ्नो क्यारियरको आकांक्षाका साथ जोडीदिए, सेभेन + गोल्ड एलएलसी, एक मिशन-आधारित लगानी मञ्च, जसले प्रारम्भिक चरणका कम्पनीहरूलाई पूंजी र रणनीतिक सल्लाहकार सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
समर्पित दाता, जेसिका २०१ 2016 को ग्रीष्म theतुमा एमएएफ बोर्डको निर्देशकमा सम्मिलित भइन्। उनी एमएएफको एडलेन्ट सल्लाहकार परिषदको सह-अध्यक्ष पनि रहेको छ, बे एरिया आविष्कारकहरूको समूहले एमएएफको लागि आर्थिक सहयोग र जागरूकता जुटाउन मद्दत गर्‍यो।
हामीसँग उसको व्यावसायिक यात्राको बारेमा कुराकानी गर्न जेसिकासँग बस्न सक्ने अवसर थियो र उनले उनलाई गर्नुपर्ने काम गर्न के गर्न उत्प्रेरित गर्छ।
MAF: हामीलाई तपाईंको बारेमा भन्नुहोस्। रुचि, चासो, आवेश?
JL: सामाजिक प्रभावलाई समर्थन गर्नु मेरो परिवारको लागि आधारशिला हो, चाहे यो मेरो छोराको प्रिस्कूल कक्षामा खाँचोमा परेकाहरूलाई खाना पुर्‍याउने वा मिसन-सञ्चालित कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने स्वयंसेवकको रूपमा कार्यरत छ। सामाजिक नवीनतामा ध्यान केन्द्रित गरेर, मेरो लक्ष्य भनेको मेरा बालबालिका र भावी पुस्ताहरूका लागि सकारात्मक विरासत छोड्नु हो। म कुनै पनि रूप मा रचनात्मक कला र डिजाईनमा ठूलो सन्तुष्टि लिन्छु - यो व्यक्तिगत प्रयासहरू जस्तै कुम्ल्याहा, घर डिजाइन, वा यहाँसम्म कि मेरो स्थानीय कफि शप जस्ता राम्रा ठाउँहरूको मजा लिदै छ! मलाई बाहिरबाट र विशेष गरी पानीको नजिक हुन मन पर्छ, त्यसैले म पर्वतारोहणमा जान, माछा मार्ने, र डुating्गामा जान मन पराउँछु। शहरको उर्जा र गतिले मलाई साँच्चिकै बाहिर र बाहिरको ठाउँको कन्ट्रास्ट र महत्त्वको कदर गर्न मद्दत गरेको छ।
MAF: कुन कार्यहरूले तपाईंलाई कार्य गर्न उत्साहित गर्दछ?
JL: मेरो लागि, यो सबै सबैको लागि अवसर सिर्जना गर्न उमाल्छ। म प्रणालीगत मुद्दाहरूको समाधान गर्न मद्दत गर्न चाहान्छु जसले केहि समुदायहरूको हानि सिर्जना गर्दछ। त्यो निर्माण भित्र, मैले केहि प्रमुख मुद्दाहरूलाई केन्द्रित गरें। पहिलो, आर्थिक समावेशीकरण: प्रत्येकले राम्रो जीवन बिताउने अवसरहरू र सडकमा अपरिहार्य बम्पहरूको लागि सुरक्षा नेटमा पहुँच गर्न सुनिश्चित गर्दै। दोस्रो, शिक्षा: प्रत्येक बालबालिकाको उमेर उपयुक्त पाठ्यक्रम र उपयुक्त रिसोर्स्ड शिक्षण वातावरणमा पहुँच छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेर। हाम्रो समुदाय भित्र धेरै क्षेत्र गम्भीर संसाधन-सीमित छन्, बच्चाहरु लाई एक नाफामा राख्छन्। तेस्रो, वातावरण: प्राकृतिक संसाधनहरूमा हाम्रो प्रभावलाई घटाउने र हामीले जिम्मेवारी लिन सक्ने हाम्रो तरिकाहरू पहिचान गर्न र हाम्रो विश्वलाई सुधार्नका लागि उत्तरदायी हुने।
MAF: के तपाइँले MAF मा संलग्न हुन चाहानुभयो?
JL: मेरो परिवार स्यान फ्रान्सिस्कोमा लगत्तै लगत्तै मैले टिफिंग पोइन्ट कम्युनिटी बोर्ड म्याच कार्यक्रममा एमएएफको कार्यकारी टोलीसँग कुरा गरें। मेरो एउटा लक्ष्य भनेको एउटा सानो तर प्रभावशाली संगठनको बोर्डमा सामेल हुनु थियो, देशभर ग्राहकहरूको विकास र सेवा गर्ने सम्भाव्यता सहित। म वास्तवमा संगठनको फोकस गर्न आकर्षित थियो व्यापक स्केलेबिलिटीको साथ प्रणाली-व्यापी परिवर्तन सिर्जना गर्न। म एमएएफको राष्ट्रिय पहुँच र स्केलेबल दृष्टिकोणमा आकर्षित भए, र एमएएफको स्टाफको व्यावसायिकता र डाटाको चालु दृष्टिकोणले सामाजिक प्रभाव सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछु। बोर्डमा सम्मिलित हुनु एकदम उचित थियो!
MAF: तपाइँ केहि महिना अगाडि MAF संग तपाइँको काम मा हेर्न लाग्नुभएको छ?
JL: मिएफले कसरी आफ्ना घटकहरूको निरन्तर परिवर्तन भइरहेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिरहेको देख्न पाउँदा उत्साहित छु, आप्रवासी समुदायको वर्तमान संकटलाई सम्बोधन गर्न अभिनव उत्पादनहरू विकास गर्न।
म प्रतीक्षा गर्न सक्दिन कि MAF यथास्थितिलाई चुनौती दिन र फराकिलो र गहिरो प्रभाव सिर्जना गर्न। म यस भयानक संगठनको हिस्सा हुन साँच्चै गर्व छ।